Lalao sy fangatahana 8 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (10 Janoary) | Vaovao IPhone
Lalao sy fangatahana 8 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (10 Janoary)
Tiako ity zavatra ity momba ny mitady lalao maimaim-poana sy fampiharana ho an'ny iPhone sy iPad. Eny, maimaim-poana na, farafaharatsiny, miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana. Marina fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia fampiharana tsy ampiasainay na tsy ho tianay tsotra izao izy ireo. Saingy, aleo hatrehana izany: ny fisintomana sy ny fitsapana ny lalao sy ny rindranasa amin'ny fitaovan'ny iOS dia efa lalao irery izay mampiala voly antsika amin'ny ora maty.
Aza adino fa ireo tolotra rehetra hasehoko anao eto ambany ireo dia Fotoana voafetraMidika izany fa azoko antoka ihany fa miasa izy ireo amin'ny fotoana famoahana ity lahatsoratra ity, saingy tsy fantatsika hoe mandra-pahoviana no hananan'izy ireo hery satria tsy ampitan'ny mpandrindra izany. Noho izany, raha misy lalao na fampiharana mahaliana anao, dia mihazakazaha mitady azy, ary azonao atao ny manombatombana raha tehirizinao na tadiavinao ny mamerina azy.
1 MyBrushes ho an'ny iPhone
2 TextCode - Code Editor miaraka amin'ny GitHub Repository
3 Lily Farm Animal Premium sticker
4 Mercantile Exchange - lalao varotra vokatra
6 Ny kitapo
7 Fiaran-dalamby DADA
8 Labyrint maoderina
MyBrushes ho an'ny iPhone
Raha tianao mandoko sy manao sary, MyBrushes ho an'ny iPhone ho tianao io, ary vao mainka aza maimaim-poana izao.
MyBrushes dia fampiharana sary hosodoko tsy manam-paharoa natao hamoronana sary sy hamerina ny fizotran'ny sary hosodoko manontolo. Izy io dia manana karazan-doko borosy azo zahana 100 hanamboarana ny vokatry ny hosodoko vita amin'ny borosy, hosodoko hosodoko, hosodoko solika, hosodoko sinoa, sary, calligraphy sinoa, sns.
Na eo aza ny anarany dia mifanaraka amin'ny iPhone, iPad ary iPod touch ity fampiharana ity. Ny vidiny mahazatra dia 0,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra.
TextCode - Code Editor miaraka amin'ny GitHub Repository
Amin'ity tranga ity dia miatrika rindranasa natokana ho an'ny mpamorona izahay; TextCode dia haingam-pandeha, maivana ary mora ampiasaina kaody, lahatsoratra, mpanonta marika. Io no fomba mety indrindra hijerena ireo kaody kaody amin'ny bus, ny lamasinina ary ny fiaramanidina. "
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao izany miaraka amin'ny fihenam-bidy 66% amin'ny € 0,99 ihany, amin'ny fotoana voafetra.
Lily Farm Animal Premium sticker
Lily's Animal Farm dia lalao fanabeazana ho an'ny kely indrindra amin'ny trano hatramin'ny dimy taona ary napetraka amin'ny habaka voajanahary amin'ny toeram-pambolena misy biby, zavamaniry, sns.
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra.
Lily Farm Animal Premium sticker€ 3,49
Mercantile Exchange - lalao varotra vokatra
«Mercantile Exchange dia lalao varotra vokatra. Ny mpilalao dia tokony hihoatra ny mpifanandrina aminy amin'ny famoronana paikadiny manokana ary hiezaka hanan-karena amin'ny vokatra varotra. "
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 33% amin'ny € 1,99 ihany, amin'ny fotoana voafetra.
«Windy dia a fitaovana mozika niomerikamiasa sy mifandraika tanteraka »izay ahafahanao mihira hira amin'ny iPhone na iPad na dia tsy manam-pahalalana na talenta aza ianao. Mandrosoa, sahala amin'i Britney rehefa mihaino azy ianao nefa tsy misy fanampiana ara-teknolojia.
Ny vidiny mahazatra dia 0,99 euro, kanefa izao dia azonao atao maimaimpoana mandritra ny fotoana voafetra.
"Ny Stock Market dia lalao mahavariana izay mampahafantatra ireo mpilalao ny fianjerana ao amin'ny Stock Market." Ity dia lalao ara-bola iray hafa izay hametrahanao ny fitsapana ny fifampiraharahana sy ny fanodinam-bidy mba hahazoana ny tampony amin'ireo mpanohitra anao.
Ny vidiny mahazatra dia 4,99 euro, kanefa izao dia azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 60% amin'ny € 1,99 ihany, amin'ny fotoana voafetra.
Ny kitapo€ 1,09
Izany dia kilalao fanabeazana toetra Natokana ho an'ny zazalahy sy zazavavy eo anelanelan'ny 6 sy 8 taona, mifantoka amin'ny "fizahana ny tontolon'ny fiaran-dalamby mahafinaritra."
Tonga machinista, mijery ny fomba fiasan'ny lokomotifan'ny etona ary mianatra ny faritra ao aminy, mamorona fanangonana fiaran-dalamby anao manokana, mamorona tantara rehefa milalao sy maro hafa. Traikefa avant-garde manana lanja fanabeazana lehibe, noforonin'ny DADA Company.
Ny vidiny mahazatra dia 2,99 euro, kanefa izao dia azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 66% amin'ny € 0,99 ihany, amin'ny fotoana voafetra.
Amin'ny alàlan'ny haavo 36 izay mihasarotra hatrany dia tsy maintsy hamindra ny baolina ianao amin'ny fanampiana tokana an'ny fironana iPhone. ny lalao mazava tsara tena nahavita be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao sy fangatahana 8 maimaim-poana na amidy mandritra ny fotoana voafetra (10 Janoary)
Apple hanokatra Apple Store any Milan noforonin'i Norman Foster
Fantsona fiampangana ho an'ny AirPods? Mazava ho azy!